Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Maxaa ku cusub Bahamas Oktoobar
Safarka Dalxiiska • Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • kariska • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Music • News • jiga • Aroosyada Jaceylka Malabka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Waa waqtigii la ballansan lahaa baxsashada dayrtaas! Haddii aad doorbideyso inaad ku raaxaysato xeebaha ciidda cad ama aad ku xirato safar safar leh xiise-raadis xiiso leh, booqdayaasha ayaa lagu soo dhaweynayaa inay la kulmaan sababta “ay ugu wanaagsan tahay Bahamas” oo leh hoyyo caan ka ah adduunka, kordhinta duulimaadyada tooska ah iyo soo jiidashada cusub ee cirifka.
Jasiiradaha Bahamas waxay guryahooda ku qaateen dhowr guulood oo waaweyn dhammaan qeybaha kala duwan ee Safarka + Waqtiyada firaaqada ah ee aadka loo filayo “Abaalmarinta ugu Wanaagsan Adduunka”.
Waxay kaloo heshay 20 magacaabid oo ku saabsan Abaalmarinta Xulashada Socdaalka Kariibiyaanka ee 2021. Online.
Codbixinta onlaynka ah ee Abaalmarinta Xulashada Socdaalka Kariibiyaanka ayaa xirmi doonta Oktoobar 31, 2021.
Bahamas waxay ku dhalaalaysaa Ictiraaf Caalami ah - Jasiiraduhu waxay guryahooda ku qaateen guulo waaweyn oo kala duwan qaybaha kala duwan Safarka + Waqtiyada firaaqada sanad walba si weyn loo sugayo ”Abaalmarinta ugu Wanaagsan ee Adduunka”Wuxuuna ku helay 20 magacaabid gudaha 2021 Abaalmarinta Xulashada Socdaalka Kariibiyaanka. Codbixinta onlaynka ah ee Abaalmarinta Xulashada Socdaalka Kariibiyaanka ayaa xirmi doonta Oktoobar 31, 2021.
Dhadhanka SLS Baha Mar -Muusikiiste ku guuleystay abaalmarinta Grammy John Legend ayaa ku soo bandhigi doona Dhadhanka SLS Baha Mar markay ahayd Noofambar 5, 2021. Tigidhada waxaa ka mid ah cunno aad u fiican, is biirsaday oo la shubay iyo galaas LVE Rosé. Ka -qaybgalayaashu waa inay ahaadaan 18 jir iyo ka weyn.
United Airlines oo ku dhawaaqday Duulimaadyo La Duugi Karo Nassau - United Airlines waxay Nassau u soo bandhigtay adeeg cusub oo Sabti aan joogsi lahayn oo ka yimid Madaarka Caalamiga ah ee Cleveland Hopkins laga bilaabo Diisambar 18, 2021. Duulimaadyada ayaa diyaar u ah inay ballansadaan horaanta Sebtembar.
Duufaanta Superyacht Marina ee Jannada soo degitaanka ayaa dib u furmaysa 2021 -Iyada oo la ballaadhiyay wareegga iyo tiirarkii ugu horreeyey ee go'an ee T-docks, Hole Hurricane Superyacht Marina wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo dhaweeyo martida martida u ah doonista doonyaha jiilaalka ee 2022 -ka. Martidu waxay ku raaxaysan doonaan degsiimooyinka doomaha raaxada leh, tafaariiqda heer caalami ah, cunto wanaagsan iyo adeegyo ballaadhan.
Ku Safro Kalsooni Kalsoonida Fasaxa Kabaha - Sandals Resorts International ayaa soo bandhigaysa Xaqiijinta Fasaxa Kabaha. Martida Sandals Royal Bahamian iyo Emerald Bay waxay heli karaan faa'iidooyin ay ka mid yihiin fasaxyada beddelka iyo dhibcaha duulimaadka, joogitaan karantiil la'aan ah iyo baajinta bilaashka ah.
Heshiisyada Deyrta kulul, Qaabka loo dhan yahay - U baxso Jasiiradda Grand Bahama oo keydi ilaa 40% markaad joogto Lighthouse Pointe oo ku taal Grand Lucayan Resort. Daaqada safarka hadda waa ilaa Oktoobar 31, 2021.
Ku hay Xagaaga Xirmooyinka Tropic –Dhicitaanku waa halkaan, laakiin weli waad sii wadi kartaa gariirrada xagaaga marka aad ballansanaysid laba ama saddex habeen oo aad joogtid Hilton oo ku taal Resorts World Bimini. Baakadaha Tropic -ka oo ka bilaabanaya $ 508 qofkiiba waxaa ka mid ah safarka wareega ee Tropic Ocean Airways oo ka socda Fort Lauderdale. Daaqadda ballansashada hadda waa illaa Diseembar 31, 2021.
Waxoogaa sii joog Baha Mar - Martida dalxiiska ee Baha Mar hel habeenka afaraad lacag la’aan marka aad ballansaneyso joogitaanka guud ahaan hoteelka oo ay ku jiraan Grand Hyatt, SLS iyo Rosewood, oo lagu daray $ 100 deyn dalxiis, marin aan xad lahayn u leh Baha Bay iyo tijaabo degdeg ah oo “Antigine Home” ah.
Hideaway Maalin Dheeraad ah - The Ocean Club, A Afar Xilli Dalxiis, Bahamas wuxuu siinayaa martida habeen afaraad oo bilaash ah oo leh saddex habeen oo isku xigta oo lacag la siinayo, oo ay la socoto gaadiidka madaarka ee gaarka loo leeyahay. Daaqada safarka hadda waxay maraysaa December 31, 2022.